उपसभामुखले राजीनामा दिनु पर्छ : गजुरेल - Janawajnews.com | Online News Portal Nepal
उपसभामुखले राजीनामा दिनु पर्छ : गजुरेल
उपसभामुख शिवमायाँ तुम्बाहाम्फेले महराकै बाटोमा अग्रसर भएको नेकपाको नेता तथा पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेलको आरोप छ । उपसभामुखको पदबाट राजिनामा नदिँदा उहाँको उहाँको प्रतिष्ठामै आँच पुगेको छ । एउटा पार्टीको अनुशासित नेताले पार्टीको सचिवालयले गरेको औपचारीक निर्णयलाई मानेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गरे राष्ट्र र जनतामा सकारात्मक शन्देश दिनु पर्ने उहाँको सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा पूर्व मन्त्री गजुरेलसंग गरिएको कुराकानी ।
सभामुख छनौंटमा नेकपालाई किन यतिधेरै सकस परेको हो ?
– नेकपा एकिकृत भएको लामो समय भएको छैन् । दुईवटा भिन्नधारबाट अघिबढेका पार्टी एकता हुँदा त्यसलाइए एउटा ठाउँमा निश्चित दिशा लिनका लागि केही समय लाग्छ । त्यसैले हरेका चिहरुमा बहस विवाद त भईनै हाल्छ ।
सत्तारुढलकै आन्तरीक कलहका कारण संसद बन्धक बनिरहेको छ, के यो न्यायोचित होर ?
– आरोप लाउनु स्वोभाविक हो । किन भने भएको त्यस्तै छ । आरोप आउँनुलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन् ।
सतहमा उपसभामुखको अडानले नेकपालाई निर्णय गर्न अफ्ठेरो परेको भनेपनि यो पूर्वमाओवादी र पूर्व एमालेको शक्ती सन्तुलन तथा गुठगत असर हो ?
– अडान लिनुलाई मैले चैं अस्वभाविक रुपमा लिएको छु । किन अडान लिनु भो । पार्टीले नै उहाँ (शिवमायाँ तुम्बाहाम्फे)लाई उपसभामुख बनायो । पार्टीले उहाँको भुमिकालाई व्यवास्था गरेको पनि छैन् । खासगरी सभामुख हामीले विपक्षी दल वा अन्यदललाई दिने कुरा पनि हुँदैन । उहाँले राजनीनामा नदिएसम्म त सभामुखको निर्वाचननै हुँदैन् । त्यसैले उहाँले किन अडान लिईरहनु भएको छ मलाई त आश्चर्य लागि रहेको छ । सोत उहाँनै हुने भएपनि त पहिला उहाँले राजिनामा त दिनु प¥योनी । राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिनु परो । त्यसपछिमात्र छलफल गर्न सकिने भो । त्यसो नगरीकन उहाँले लिएको अडान सहज जस्तो लागि रहेको छैन् । उहाँले राजिनामा दिएन सभामुखको निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढ्छ । त्यसपछि न उमेदवारी तय गर्ने हो । उहाँले पहिलै राजिनामा दिनु आवश्यक हुन्छ । अनि निर्वाचन प्रकृया अघि बढेपछिमात्र पार्टीले उमेदवार तय गर्छ ।
उपसभामुखले लिएको अडानमा राष्ट्रपति र पूर्व एमालेकौ उच्चतहका नेतृत्वको साथ छ भन्ने बुझिन्छ नि, के हो खासमा ?
– मानिसले आशंका त तेही गरीरहेका छन् । तर, हामीले त्यसै भनिहाल्न त मिल्दैन् । तरपनि नेकपा भित्रका गुठ उपगुठका आफ्नै इन्टेस्टहरु होलान । त्यसले गर्दापनि यो समस्या अलि जटिल भएको हुन सक्छ । खासगरी के हो भने हामिले सभामुख वा उपसभामुख मध्य एउटा पदचै अर्को विपक्षी पार्टीलाई दिनै पर्छ । भिन्न लिंगको हुनै पर्ने भिन्न पार्टीलाई दिनै पर्ने हुँदा सभामुखपदचै हामीले लिनै पर्ने हुन्छ । उपसभामुख पद अन्यपार्टीलाई दिनै पर्ने हुन्छ । उपसभामुख दिनै पर्ने भएपछि त उहाँले राजीनामा गरेर बाटो सहज गरिदिनु परोनी । त्यसमा ढिला गर्नु पर्ने आवश्यक नै छैन् । त्यसपछि बरु बहस छलफल गर्न सकिन्छ को हुने कसलाई उमेदवारी बनाउँने भन्ने कुरा तय हुन सक्छ ।
उपसभामुखको राजिनामा कहिले हुन्छ त ?
– त्यो तपार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । उहाँले हिजै राजीनामा दिनु पर्ने थियो । तर, पनि विलम्ब गरीरहनु भएको छ । यसले उहाँलाई पनि फाईदा पु¥याउँदैन् । यसलाई जनताले पनि राम्रो मानिरहेका छैनन् । उहाँलाई पार्टीले हटाएको पनि हैन् । सभामुख र उपसभामुख परकफरक पार्टीको हुनु पर्ने भएपछि परिस्थितीले नै यस्तो गरायो । उहाँ नै भएपनि त आखिरीमा राजीनामात दिनु परोनी । न त्र सभामुखको त उमेदवारी दिन मिल्दैन् । उहाँ रहँदा रहँदै नेकपाले उमेद्वारी कसरी दिन मिल्छ त ?
उपसभामुखले पार्टीको निर्देशन किन नमान्नु भएको हो त ?
– त्यहित अचम्म लाग्छ । एउटा पार्टीको अनुशासित नेता, कार्यकर्ताले पार्टीको सचिवालयले गरेको औपचारीक निर्णय नमान्ने भन्ने कुरात एउटा गम्भीर विषय हो । यसले उहाँलाई पनि राम्रो गर्दैन जनताले पनि राम्रो मानेका छैनन् । सभामुख चै सत्तारुढदललेनै लिनुपर्छ भन्ने आम जताले बुझेको कुरा हो । उहाँले राजीनामा नदिएसम्म सत्तारुढदलले सभामुखको उमदेवार अघि सार्नै सक्दैन् । उहाँले जति अटेर गरिरहनु भएको छ उहाँको प्रतिष्ठामै आँच पुगेको छ । अर्कोतर्फ उपसभामुखले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने महरा जिले ठुलो गल्ती गर्नु भयो । त्यसले जनताको भावनामा चोट पुग्यो । राष्टको छवि पनि विग्रीयो । अब उपसभामुखले त्यसलाई सम्हाल्नु पर्ने तर, उहाँपनि त्यही दिसातिर गईरहनु भएको छ । उहाँले त अहिले जनतालाई जुन पिडाबोध भएको छ राष्ट्रको सभामुख जस्तोपद भएको व्यक्त जेलमा गइरहेको लज्जाजनक स्थिती छ त्यसलाई सम्हालेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरे र अघि बढ्नु पर्ने थियो । सकारात्मक शन्देश दिनु पर्ने थियो । झन उल्टै महरा जि जुनबाटो हिड्नु भो त्यहीबाटो तिर अग्रसर भएजसरी अफ्ठेरो पार्ने हिसावले काम गर्नेगरी जानु हुन्न । उहाँ गम्भीर हुन जरुरी छ ।
प्रचण्डलार्ई एकल कार्यकारी अध्यक्ष वा अर्का अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष बनेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि तपाईहरु उपसभामुखलाई सभामुख मान्न तयार हो र ?
– त्यो त तर्क हो । चिचहरु जटिल भएका कारणले गर्दा तर्क गरेको मात्र हो । त्यो अहिले गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि हैन् । हामिले त्यस्तो महसुस गरेका पनि छैनौं । किनकी केपी शर्मा ओलीलाई पाँचवर्षनै कार्यकाल सम्पन्न हुने हिसावले पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । तर यस्ता चिज हरु जो विभिन्न इन्टेस्टहरु अगाडीसरेर आउँदा चै तर्क गरेको हो । यस्तो पनि गर्दा हुन्छ नी के हुन्छ भनेर त्यो तर्क गरेका हौं ।
एकता भएपनि अझैं भागबन्डा नै कायम गरीराख्ने हो ?
– अहिले भागबण्डामै भईरहेको छ । मन्त्रीमण्डल बनो भागबढडामै भयो । केन्द्रीय समिति बन्यो, स्थायी समित बन्यो भागबण्डामै भईराछ । मोर्चाहरु, जबसहरु, विभागहरु भागबण्डामै भईरहेको छ । महाधिबेसन भएपछि एउटा नयाँ सिराबाट छलफल हुँन सक्छ । महाधिबेसनसम्मत भागबण्डाबाटै जानु पर्ने हुन्छ सहमतिबाट अघि बढ्ने भनेको के त । सहमतिबाट जाने भनेको त्यही नै होला ।
सिन्धुलीको मरिणमा करेन्ट लागेर दुई जना गम्भीर घाइते, हेलिकप्टर मार्फत काठमाण्डौं लगिदै
मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका प्यानलनै बिजयी,मोक्तानलाई पछ्याउँदै माझि
मरिण गाँउपालिका ५ सुनखानीमा पशुको उचित व्यबस्थापन सम्बन्धि ३ दिने तालिम सम्पन्न
खुल्ला रचना वाचन तथा टिप्पणी कर्यक्रम सिन्धुलमिाढि सम्पन्न